musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Sports » Expo 2020 Dubai inowana yakatarwa dhirivhari kubva kuUS Open
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Entertainment • Hospitality Industry • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Sports • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • UAE Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kunze kweNew York, mabhegi etenisi achagoverwa mukati medzimwe nzira dzeEmirate muUnited States.
Don Victor Mooney ndiye wekutanga Mutema tenesi mutambi kuhwina singles mazita kuUS Open, yeAustralia Open uye Wimbledon.
Don Victor Mooney ari kuunganidza tenesi, mabhora uye zvekuchikoro zvevana panguva yeUS Open.
Nekuda kwe COVID-19 denda nyowani nyowani Expo 2020 Dubai mazuva ari Gumiguru 1, 2021 - Kurume 31, 2022.
Akakwasva achidarika Atlantic uye akachovha bhasikoro muEmirates. Zvino, Don Victor Mooney, Mutungamiri weHR 1242 Resilience Project, ari kuunganidza tenesi, mabhora, uye zvekuchikoro zvevana panguva yeUS Open. Mushandirapamwe unonzi: Operation Arthur Ashe. Arthur Ashe akatsigira simba remabhuku nedare reTennis. Ashe aive wekutanga Mutema tenesi mutambi kuhwina singles mazita kuUS Open, yeAustralia Open uye Wimbledon.
Iko kuunganidza uye kurongedza mushandirapamwe kuchapera munaGunyana 12. Kunze kweNew York, mabhegi etenisi achagoverwa mukati medzimwe nzira dzeEmirate muUnited States. Yekupedzisira tenesi bhegi ichaendeswa kuDubai Expo 2020, iyo inovhura Gumiguru 1, 2021.
If Emirates kabhini vashandi vane yakawedzera layover muNew York, ivo vakagamuchirwa kuti vatibatsire kutakura mamwe tenesi mabhegi, akadaro Mooney.
Expo 2020 yakarongerwa kuve World Expo ichaitirwa neDubai muUnited Arab Emirates, pakutanga yakarongerwa 20 Gumiguru 2020 - 10 Kubvumbi 2021. Zvisinei, nekuda kwechirwere che COVID-19 muUnited Arab Emirates, misi mitsva ndiGumiguru 1. , 2021 - Kurume 31, 2022.